Ifulethi le-L&B- ukubukwa kolwandle -CITRA011015-LT-1128 - I-Airbnb
Ifulethi le-L&B- ukubukwa kolwandle -CITRA011015-LT-1128
U-Mariano Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elilungiswe ngokuphelele ngaphansi kuka-2km ukusuka ogwini lokuqala kanye ne-4km ukusuka e-Lerici.
Ikhodi ye-CITRA: 011015-LT-1128
Indlu yethu isemgwaqweni omkhulu owela idolobhana eliyisici lasePitelli emagqumeni aseLerici naseSanterenzo.
Ngaphakathi ilungiswe ngokuphelele, igcina izici ezithile zenkathi, njengezitebhisi zamatshe. Ifulethi litholakala esitezi sesibili nangaphezulu futhi liqukethe: amakamelo okulala amabili amakhulu, igumbi lokuhlala elinombhede kasofa kanye ne-TV, ikhishi, igumbi lokugezela elineshawa nendawo encane yokuwasha.
Amakamelo nekhishi kubheke indawo ethokozisayo yolwandle lapho ungabuka khona isiqhingi sasePalmaria kanye nesiqhingi sasetino. I-Palmaria Island iyindawo enhle yokuvakasha yezivakashi yabathandi bokuhamba ngezinyawo; empeleni ungakwazi ukuhamba ezindleleni futhi ubabaze bonke ubuhle balo kanye nombono phezu kwedolobha lasePortovenere, kuhlanganise nesonto laseSan Pietro, enye indawo yokuvakasha emangalisayo. Zonke izindawo ziyafinyeleleka kalula kusuka e-Pitelli. Uzothola lonke ulwazi endaweni yethu. Elinye lamagumbi okulala amabili likwazi ukufinyelela ithafa elinezihlalo zedekhi, itafula, izihlalo lapho ungachitha khona ubusuku bakho ubuka umbono ngengilazi enhle yewayini ekuphumuleni okuphelele. Indlu iphelele ngakho konke ukunethezeka (ilineni, amathawula, ikhishi elihlome ngokuphelele). Ukusuka ePitelli ungavakashela amadolobhana angomakhelwane wonke olwandle izindawo ezinhle nezinezici: iLerici, iSan Terenzo, iTellaro, izindawo ezi-5 ngesikebhe usuka eLerici noma usuka eLa Spezia ngesitimela, izinkwali zaseCarrara, ngehora ongavakashela ePisa futhi emahoreni amabili uFlorence.
Sizama ukwenza konke okusemandleni ethu ukuze uzwe imfudumalo yekhaya lakho eholidini, ngithemba ukukwamukela maduze.
Sawubona Mariano kanye no-Elena
I-Pitelli iyisizinda sesigodi saseLigurian esibheke olwandle lapho kubusa umoya ozolile futhi onokuthula. Ingaphakathi ledolobha lingahanjelwa emihubheni lapho izindlu zigonana zodwa uze ufinyelele esigcawini esincane sesonto esibheke idolobha, ungakwazi ukuhamba ukhuphukele enqabeni yaseCanarbino eyaqala ngeMpi Yezwe Yokuqala futhi ilawula yonke indawo nge. Marittima. emgwaqeni kukhona indawo yokudlela evamile "Pin Bon" enombono omangalisayo wolwandle lapho unganambitha khona izitsha zezinhlanzi ezinhle kakhulu.
Ngaso sonke isikhathi uhamba ngezinyawo ngemizuzu engu-20 ungafika ogwini lokuqala, i-La Baia Blu i-oasis yangempela olwandle uzothola ithuba lokuya olwandle oluhlomele mahhala kulo nyaka lilungiswe nge-bar encane ekulungiselela ama-aperitifs ukuze uphuze. ogwini, noma ukusungulwa lapho uzothola Bar Indawo yokudlela edayisa Piscine. Konke lokhu kuseduze kakhulu nasekhaya.
Esigodini uzothola isitolo esikhulu ibhusha ikhemisi, umlungisi wezinwele, ugwayi, umbhaki we-pizzeria ... nasi isisindo esifanele samaholide akho sizokujabulela ukukubamba futhi sikwazi ukukunikeza indawo yokuhlala ethokomele, ethule lapho ukhona. uphefumule umoya ngamaholide sawubona ... .Thina ezimele wena ........
Sisebenzela ukukwamukela ngendlela engcono kakhulu, le ndlu maduze izohlonyiswa ngendlu yokugezela yesibili, nelondolo.
Ciao , vivo a La Spezia ,con mia moglie Elena e i miei figli letizia e francesco sono ingegnere elettronico, nella mia azienda,tratto impianti si sicurezza antintrusione, videosorveglianza . Dal 2018 mi sono appassionato insieme a mia moglie alla cura della nostra casetta di Pitelli li coltiviamo un orto bellissimo che si affaccia sul mare ..un altro hobby che ci appassiona tantissimo è il trekking e appena possiamo andiamo sulle nostre montagne le Apuane. L&B significa Liana e Belvio erano i miei genitori ,mi hanno lasciato questa casa che io adoro per i ricordi che porta con se il panorama meravigioso, la tranquillità immersa nella natura.......
Ciao , vivo a La Spezia ,con mia moglie Elena e i miei figli letizia e francesco sono ingegnere elettronico, nella mia azienda,tratto impianti si sicurezza antintrusione, video…
UMariano Ungumbungazi ovelele